Opinions – Page2– Kachinwaves
စဉ်းစားသင့်သော အချက်တစ်ချက် 1 min read
maran gam5years ago 10948
ဇူလိုင် ၂၁ တိုင်းရင်းသားပြည်သူများနှင့် ဗမာတိုင်းရင်းသားပြည်သူများသည် အာဏာရှင်စနစ် ရွံရှာခြင်းနှင့် ဒီမိုကရေစီ လိုလားခြင်း၌ တူညီကြသည်ဟု ပြောနိုင်သော်လည်း ဖက်ဒရယ်စနစ်အပေါ် ရှုမြင်လက်ခံခြင်းတွင်မူ ကွဲပြားခြားနားမှု ရှိနေဆဲဖြစ်သည်ဟု ပြောနိုင်မည် ထင်ပါသည်။ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို ပြောလျှင် တိုင်းရင်းသားများ အချင်းချင်းကြား တစ်နည်း ပြည်နယ်နှင့်ဗဟိုကြားက အာဏာခွဲဝေခြင်းနှင့် သယံဇာတခွဲဝေခြင်းကို ပြေပြေလည်လည်... Read More
ကိုယ်ပိုင်တဲ့ခွက် ဘာခွက်လဲ သိရမယ်။ 1 min read
ကိုယ်ပိုင်တဲ့ခွက် ဘာခွက်လဲ သိရမယ်။
maran gam5years ago 44
Hka San Lwi (၁၈ . ၅ . ၂၀၁၇) အရပ်ဘက်လေးမျက်နှာကို ကြည့်လိုက်ရင် စိမ်းပြာရောင် တောင်တန်းကြီးများက မြို့လေးကို ဘယ်တော့မှ မဖျောက်မပျက်စေမယ့် သဘာဝ မဟာတံတိုင်းကြီးလို ကာရံထားတယ်။ ထိုမြို့ကလေးနဲ့ နီးလာလေလေ ကြည်လင်အေးမြနေတဲ့ စိမ်းညို့ညို့ ချောင်းလေးက တောင်တန်းများကြားမှာ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်... Read More
KIO နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းကြောင်းများ 1 min read
KIO နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းကြောင်းများ
maran gam5years ago 53
၂၀၁၇ မေ ၁၆ အယ်ဒီတာတစ်ဦး ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (KIO) UNFC ကနေ နုတ်ထွက်စာ တင်လိုက်တဲ့သတင်းဟာ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်မှာ ရိုက်ခတ်မူများရှိခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကေအိုင်အိုဟာ အစိုးရတပ်နဲ့ တိုက်ပွဲနဲ့ပဋိပက္ခတွေ အဓိကဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ဖြစ်တဲ့အပြင် လက်ရှိအဖွဲ့ဝင်(၇)ဖွဲ့ ပါဝင်တဲ့ ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ... Read More
ဒီမုိုကရက် ပညာရေး နဲ့ အာဏာရှင် ပညာရေး… 1 min read
ဒီမုိုကရက် ပညာရေး နဲ့ အာဏာရှင် ပညာရေး…
maran gam5years ago
Hkalen Uma ၁၁ မေ ၂၀၁၇ ချင်းမုိုင်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ ပညာရေး workshop တခုမှာ ကနေဒါ နုိုင်ငံက အခြေခံပညာ ကျွမ်းကျင်သူ ဆရာမ တစ်ယောက်က Facilitator လုပ်ပေးတယ်။ သူက ထုိုင်းအစုိုးရ ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမတွေကုို သင်တန်း ပေးနေကျဆုိုတော့ ထုိုင်းဆရာ၊... Read More